ကမ္ဘာပေါ်က အပျင်းအကြီးဆုံး တိရိစ္ဆာန် (၆) မျိုး - Shwe Khit Online TV
HomeWorld Topကမ္ဘာပေါ်က အပျင်းအကြီးဆုံး တိရိစ္ဆာန် (၆) မျိုး
August 13, 2021 Shwe Khit Online TV World Top 0
သင်ဟာ အပျင်းကြီးတဲ့ သူတစ်ယောက်လား ? ဒါပေမယ့် သင်ဘယ်လောက်အပျင်းကြီးကြီး ဒီသတ္တဝါလေးတွေကို တော့မှီမယ်မထင်ပါဘူး။ သူတို့တွေ ဘယ်လောက်အပျင်းကြီးသလဲဆိုတာ ဒီစာလေးကို ဆက်ဖတ်ကြည့်ရင် သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။shwekhitonlinetv.com
၁။ ခိုအားလား (KAOLA)
ကမ္ဘာပေါ်မှာအပျင်းတကာ့အပျင်းဆုံး တိရိစ္ဆာန်ကိုပြပါဆိုရင်တော့ ခိုအားလား လေးတွေကိုပဲ နံပါတ်(၁) ဦးစားပေးဖော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကောင်လေးတွေကတော့ ဝဖိုင့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်၊ တိုတုတ် တဲ့ခြေထောက်၊ ထူကဲတဲ့အမွှေးနုတွေပါရှိပြီး အမြီးတော့မရှိကြပါဘူး။ shwekhitonlinetv.com
သူတို့ရဲ့ အပျင်းကြီးချက်ကတော့ တကယ်ကို လက်ဖျားခါလောက်ပါတယ်။ ခိုအားလားတွေဟာ တစ်နေ့ကို (၂)နာရီကနေ(၆)နာရီအထိသာ အိပ်ရာကနေနှိုးထလေ့ရှိပြီး ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာ ကြုံတဲ့နေရာမှာ ကြုံသလိုအိပ်စက်ကြပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
သူတို့အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်တွင်းအစာချေဖျက်အားအကောင်းဆုံးအချိန်တွေဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး အစာကတော့ ယူကလစ်ပင်ရဲ့အရွက်ကိုဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ ပါးစောင်မှာငုံထားလေ့ရှိပါတယ်။. shwekhitonlinetv.com
၂။ စလော့ (SLOTH)
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ အလွန်ပျင်းရိတဲ့သူတွေကို SLOTH တွေနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းလေ့ရှိကြပါတယ်။ SLOTH တွေဟာ တစ်နေ့ကို နာရီ(၂၀) ထက်မက အိပ်စက်အနားယူလေ့ရှိပါတယ်။ မျောက်မျိုးနွယ်ဝင် တစ်မျိုး ဖြစ်တယ်လို့သိရပေမယ့် သူတို့ကတော့လေးကွေးစွာ လှုပ်ရှားကြတဲ့ မျိုးစိတ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
အများဆုံးတွေ့ရှိတာကတော့ တောင်အမေရိကတိုက်က အပူပိုင်းမိုးသစ်တောတွေထဲမှာ ဖြစ်ပြီး တစ်နေကုန် အကိုင်း(၃)ကိုင်း လောက်ပဲကူးသန်းနေထိုင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါတောင် မဖြစ်မနေ ရွေလျားရမဲ့ အကြောင်း ရင်းပေါ်မှသာ ကူးသန်းကြတာပါ။ အိပ်ရာကနေ နှိုးထတဲ့နာရီအနည်းငယ်လောက်မှလဲ သူတို့ဟာ နီးစပ်ရာအစာကိုသာရှာဖွေစားသောက်ပြီး နားနေလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုသူတို့ဘယ်လောက် အပျင်းထူလည်းဆိုတာ ကိုခန့်မှန်းလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ shwekhitonlinetv.com
၃။ အော်ဖော့ဆန် (OPOSSUM)
အမေရိကန်နဲ့သြစတေးလျတို့မှာတွေ့ရတဲ့ အပင်နေ ကြွက်တစ်မျိုးလို့ သတ်မှတ်လို့ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာလည်း တကယ့်ငပျင်းကောင်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို(၁၈)နာရီကနေ နာရီ(၂၀) အကြားအိပ်စက်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
အကောင်နဲ့မလိုက် အောင်လှုပ်ရှားမှုက လေးကွေးကြပြီး အိပ်တဲ့အခါမှာလည်း ‘ကုလားသေကုလားမော’ အိပ်လေ့ရှိပါတယ်။ နေရာတစ်နေရာ ဒါမှမဟုတ် သစ်ပင်တစ်ပင် တည်းမှာပဲ ကာလအတော်ကြာအောင် နေထိုင်ကြပြီး သေရေးရှင်ရေးလို အခါမျိုးမဟုတ်သရွှေ့ နေရာပြောင်းဖို့ မစဉ်းစားဘူးလို့သိရပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၄။ ပုရွက်စားကောင် (ECHIDNA)
မြန်မာလိုဆို ပုရွက်စားကောင်လို့ခေါ်ဝေါ်တက်ကြတဲ့ ဒီကောင်လေးတွေကတော့ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး (၁၂) နာရီအိပ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူတို့ဟာ လှုပ်ရှားမှုအလွန်နှေးကွေးကြပြီး တစ်နေ့ကို (၁၂)နာရီလောက် အိပ်စက်အနားယူလေ့ရှိကြပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
ECHIDNA တွေရဲ့ မွေးရပ်ဒေသကတော့ သြစတေးလျတိုက်ဖြစ်ပြီး နို့တိုက်သတ္တဝါတွေအထဲမှာတော့ အပူချိန်ဒဏ်ကို အလွန်ကြောက်တဲ့ သက်ရှိမျိုးတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အပူဒဏ်ကိုကြောက်ရွံတာကြောင့် ECHIDNAတွေဟာ ညအချိန်ရောက်မှသာ တွေ့မြင်ရလေ့ရှိပြီး နေ့အချိန်မှာတော့ အိပ်စက်နေကြတာများပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၅။ ပန်ဒါဝက်ဝံ (PANDA)
ပန်ဒါဝက်ဝံလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ကိုရိုကားယားနိုင်လွန်းတဲ့ ဝဖိုင့်ဖိုင့်ချစ်စဖွယ် ဝက်ဝံလေးတွေကို အားလုံးရဲ့ မျက်စိထဲမြင်မိမယ်ထင်ပါတယ်။ ပန်ဒါဝက်ဝံတွေဟာ တစ်နေ့ကို (၁၀)နာရီ ဝန်းကျင်လောက်ဆက်တိုက် အိပ်စက်လေ့ရှိတဲ့ အပြင် ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာလဲ တွေ့ကရာနေရာမှာ ကြုံရင်ကြုံသလို မှေးလေ့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
ပန်ဒါတွေဟာ ဝါးပင်လိုမျိုး အစားအစာတွေကိုနှစ်သက်လေ့ရှိပြီး တစ်နေ့ကို အစားအစာ (၂၀)ကီလိုဂရမ်လောက်ကိုစားသောက်လေ့ရှိပါတယ်။ စားချိန်၊ သောက်ချိန်နဲ့ အိပ်ချိန်တွေကသာ ပန်ဒါတစ်ကောင်ရဲ့တစ်ဘဝတာကို လွှမ်းမိုးထားလေ့ တာကြောင့် သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ နှေးကွေးလေးလံနေတာကိုတော့ အံ့သြစရာ မရှိပါဘူး။ shwekhitonlinetv.com
၆။ ဥသြငှက် (KOEL)
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ နွေဦးအခါမှသာ မြည်တွန်သံကြားရတတ်တဲ့ ဥသြငှက် လေးတွေဟာ လည်းဒီစာရင်းမှာပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ အပျင်းထူတဲ့ ဥသြငှက်တွေဟာ ကိုယ်ပိုင်အသိုက်ကို မတည်ဆောက်ပဲ အခြားငှက်တွေရဲ့အသိုက်မှာ ‘ဥ’ ဥလေ့ရှိပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
ဒါ့အပြင် ဥသြငှက်တွေရဲ့ ‘ဥ’တွေဟာ အခြားငှက် ‘ဥ’ တွေထက်စောပေါက်လေ့ရှိတာကြောင့် သူတို့ဥတွေအကုန်ပေါက်ပြီးတာနဲ့ အသိုက်ထဲကတစ်ခြား ငှက်ဥတွေကို အသိုက်အပြင်ကိုတွန်းချတက်ကြပါတယ်။ သူများအသိုက်မှာလည်းဝင်ဥသေးတယ် သူများရဲ့ ဥတွေကိုလည်း ဒီလိုလုပ်တာကြောင့် ဥသြငှက်တွေကို အကျင့်ပုတ်တတ်တဲ့ ငှက်မျိုးစိတ်တွေအဖြစ် လူအများက သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
ကဲ ဒီအကောင်လေးတွေရဲ့ အပျင်းထူချက်ကတော့ တကယ့်ကို လက်ဖျားခါလောက်ပါရဲ့နော်။ သူတို့ထက်ပို အပျင်းကြီးတဲ့ သတ္တဝါလေးတွေကို ပရိသတ်ကြီးက သိရှိထားရင်လည်း ဗဟုသုတ အဖြစ် ကွန်မန့်မှာပြန်လည် မျှဝေပေးသွားပါဦးနော်။
တစ်ချိန်လုံး ဖုန်းသုံးနေသူတွေ ခံစားရနိုင်တဲ့ ရောဂါဆန်းတစ်ခု
ကမ္ဘာ့အလှဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ ငှက်မျိုးစိတ် ဆယ်မျိုး
ကျိကျိတက် ချမ်းသာပေမဲ့လည်း ကားအကောင်းစားတွေ ဝယ်မစီးကြတဲ့ နာမည်ကြီး ဆယ်လီများ